XOG: Musharax si Lama filaan ah taageero aan caadi aheyn uga helay musharixiintii ugu tirada badan ee ku jirta labada Aqal – Kismaayo24 News Agency
XOG: Musharax si Lama filaan ah taageero aan caadi aheyn uga helay musharixiintii ugu tirada badan ee ku jirta labada Aqal
by Tifaftiraha K24 4th February 2017 015
Xildhibaanada ugu cad cad Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa taageero u muujiyay musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, oo hadda ku sugan Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada ugu tunka wayn Labada Aqal, ayaa waxay si dhow ula socdaan inaanu Shariif Sheekh Axmed haysan mid lamid ah dhaqaalaha ay haystan Madaxweyne Xasan Sheekh Axmed iyo musharaxiinta kale qaarkood.
Xildhibaanada, ayaa waxaa hadana la leeyahay waxay Shariif Sheekh Axmed u ballanqaadeen in ay codkoodu siin doonaan marka la gaaro maalinta doorashada, sababo ku aadan, iyagoo ka cararaya in talada dalka uu markale ku soo laabto Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xildhibaanadan, ayaa rumeysan in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku fashilmay hogaaminta dalka afartii sano ee la soo dhaafay, sidoo kalana ay u arkaan shakhsi aan isu wadi karin shacbiga Somaliyeed.
Mudane ka tirsan Aqalka Hoose, ayaa sheegay in Xildhibaanadu ay Shariifka u arkaan musharaxa ugu macquulsan, ee dalka ka saari kara marxaladda adag ee uu ku sugan yahay.
Mudanaha, ayaa intaa ku daray Xildhibaanadu in ay ogyihiin in kuwo badan oo iyaga ka tirsan la dili doono, haddii markale uu Xasan Sheekh Maxamuud ku guuleysto hogaaminta dalka.
Xildhibaanada xabadka u garaacanaya sidii uu Shariif Sheekh Axmed ku noqon lahaa hogaamiyaha xigga, ayaa waxay qaarkood si dhow ula soo shaqeeyen xerta Madaxweyne Xasan Sheekh, walow ay markii dambe siyaasadda ku kala irdhoobeen.
Musharax Shariif Sheekh Axmed
C/laahi Axmed Cali (Caddow Cali Gees) oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada Xafiiska Madaxtooyada, ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu wax ka bedelay qorshihiisii hore ee madaxtinimada dalka, isla-markaana uu taageeray Shariif Sheekh Axmed.
C/laahi Axmed Cali oo ah Mudane ka tirsan Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Somaliya, sidoo kalana ah ganacsade haysta mallaayiin dollar, ayaa waxaa la leeyahay wuxuu ballanqaaday in hantidiisa uu ku garab joogsan doono Shariif Sheekh Axmed.
Ganacsadahan oo ku heyb ah Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in Xildhibaan kasta oo codkiisa iibsanaya uu diyaar ula yahay in uu siin doono in ka badan dhaqaalihii uu ka heli lahaa Villa Somalia.
Caddow Cali Gees oo sanadihii la soo dhaafay uu cilaaqaad wanaagsan kala dhaxeeyay Madaxweynaha Somaliya, ayaa waxaa muddooyinkan dambe ka dhex abuurmay khilaaf xoogan.
Dhanka kale hoyga Shariif Sheekh Axmed uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho oo ku yaala agagaarka Isgoyska KM4, ayaa waxaa laga dareemaya mashquul xoog lihi, iyadoo dadka qaarkood ay adag tahay in ay la kulmaan Shariifka.
Siyaasi Jimcihii hoygaasi u tagey in uu kula soo kulmo Shariif Sheekh Axmed, ayaa wuxuu sheegay inaanu fursad u helin la kulankiisa, dadka soo booqanaya oo aad u fara-badan awgood.
Siyaasigan oo magaciisa u qariyay sababo amni, ayaa yiri “Mar aan shalay booqasho ku tagey guriga Madaxweynihii hore ee Somaliya, ayaa waxaan waayay fursad aan ku salaamo, iskaba daayee xaaladda oo aan ka wareysato.”
“10-kii daqiiqaba waxaa guriga imaanaya gaari ay saaran yihiin Xildhibaano, siyaasiyiin, saraakiil ciidan, ganacsato ama odayaal dhaqameedyo, iyagoo raba inay la kulmaan Shariif Sheekh Axmed.”
“Runta markaan kuu sheego habeen iyo maalinba mashquul aan caadi ahayn ayaa ka jira guriga Shariif Sheekh Axmed. Xitaa waxaan maqlay in ku filan inuusan seexan Shariif. Waxaan sheeko ku hayaa dadka qaarkood inay guriga yimaadaan isagoo jiifo, ayna dhahaan illaa uu ka soo kacaayo/toosaayo waan sugeynaa.”
“Marka aad soo booqato gurigan waxaad xaqiiqsaneysaa inaysan Xildhibaanadu kala joogsi lahayn, waxaana kuugu dhalaneyso kalsooni ah in sanadkan Shariif Sheekh Axmed loo cumaamadi doono talada dalka.”
Ololaha xoogga lihi ee Shariifku uu ka wado Caasimadda Muqdisho, ayaa waxaa la leeyahay waxay walaac gelisay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xertiisa Dam Jadiid.
DEG DEG: Musharax si weyn loo hadal haayay oo Saakay ku dhawaaqay in uu tanasulay+Magaciisa iyo sababta
War Cusub: Weerarkii kulbiyoow muxuu ku qasbay Dowlada kenya in ay ku dhaqaaqdo Maxaadse ka ogtahay Cadaadiska kenya soo fuulay wixii weerarkaasi ka dambeeyay??
SAWIRRO: Ciidanka Badda Somaliya Maanta Dabaal Dagaya.